संरचनाहरु पूर्ण नगरि अभियान मात्रै भन्दा प्रभावकारी हुन सकेन - www.khabardabali.com | Latest news of Nepal,world news, articles, literature, Business news, Entertainment and more संरचनाहरु पूर्ण नगरि अभियान मात्रै भन्दा प्रभावकारी हुन सकेन - www.khabardabali.com
संरचनाहरु पूर्ण नगरि अभियान मात्रै भन्दा प्रभावकारी हुन सकेन
जेठ १५ गते, २०७६ - १०:१९
काठमाडाै‌ । जागरण अभियानले उद्देश्य अनुरुप प्रभावकारी काम गर्न सकेन । प्रभावकारी बनाउन नसक्नुमा मुख्यतः दुईवटा समस्या भएको देखिन्छ । एउटा संरचनाहरु रिक्त हुनु अनि दोस्रो गुटगत समस्याले अल्झनु हो ।
पार्टीको तल्लो संरचनाहरु अझै रिक्त अवस्था मै छन् । जसको कारणले अभियान पनि फितलो खालको हुन पुग्यो । अहिले पनि हामी मुलुकभरका सबै वडाहरुलाई पूर्णता दिन नसकेको अवस्थामा छौं । ७५३ नै पालिकामा हाम्रो कार्यक्रम जान सकेको भए अझ धेरै प्रभावकारी हुन्थ्यो । सबै प्रदेश क्षेत्रमा गतिविधि हुन सकेको भए नतिजा देखिने गरि आउँथ्यो । सबै निर्वाचनमा क्षेत्रमा हाम्रो उपस्थिति भएन । त्यसकारण सबै संरचनालाई सक्रिय बनाउँदै अभियान चलाउन सकेको भए उद्देश्य लक्षित अनि प्रभावकारी हुन्थ्यो ।
संरचना पूर्ण नगरिकन अभियान मात्रै चलाउँछु भनेर हामीले भन्दा पक्कै पनि अपेक्षाकृत परिणाम आउने अवस्था हुँदैन् । तर पनि यसले पार्टीलाई थोरै गतिशिल भने बनाउन भूमिका खेलेको छ ।
केन्द्रमै समस्या भएपछि तल समस्या नहुने भन्ने पनि भएन् । हामीले संगठन बनाउने कुरालाई प्राथमिकता किन नदिएको ? पार्टीको नीति निर्माण गर्ने विषयलाई किन प्राथमिकता दिन नसकेको ? प्रतिपक्षी भूमिका बनाउने सबालमा देखिएका भूमिकालाई किन अस्वीकार गरेको ? सशक्त प्रतिपक्षी बन्न हामीले कस्तो तौर तरिका अपनाउनु पर्छ ? भन्ने प्रश्न तलबाट धेरै आएको छ । यसको उत्तर केन्द्रले पनि दिनसक्ने अवस्था छैन् । हाम्रो विधानमा जे व्यवस्था छ त्यसलाई पालना गरे त रिक्त संरचनालाई पूर्णता दिन समस्या हुँदैन । यसलाई किन प्राथमिकता दिन सकिएन् ?
अहिले गुटबन्दीको अवस्था पनि कांग्रेसभित्र गम्भिर खालकै छ । यस सन्दर्भमा धेरै प्रश्न उठेको छ । साथीहरुले गुटबन्दीको अन्त्य हुनुपर्छ भनेर कुरा उठाउनु भएको छ । त्यसैले यो अवस्थालाई अन्त्य नगरेसम्म हाम्रो अभियान एकिकृत भएर जाने अवस्था हुँदैन् । नेतृत्वकर्ताले त्यसलाई गम्भिरतापूर्वक हेर्दै समाधानतर्फ पहल लिनुपर्छ ।
कार्यक्रम हुँदै गर्दा नियमित महाधिवेशन समयमा नगरेर त्यसलाई सार्नका निमिक्त गरिएको भन्ने आंशका पनि आएको छ । तलका संरचनाहरुलाई पुरा नगरी एकैचोटी महाधिवेशन गर्न यसो गरिएको भन्ने पनि गुनासो छ । आफ्नै गुटबन्दीलाई बलियो बनाउन गरिएको प्रयत्न भन्ने पनि छ ।
तर तमाम टिप्पणीहरुका बाबजुत पनि यो जागरण अभियानले केहि सकारात्मक पहल भने लिएको देखिन्छ । सबै साथीहरु केहि हदसम्म भएपनि सक्रिय बनाउन भूमिका खेलेको छ । हो चर्चा भएजस्तो केन्द्रिय नेतृत्वको महाधिवेशन सार्ने जस्तो रणनीनि हुन सक्छ । तर तलका साथीहरुले यसलाई अवसरको रुपमा प्रयोग गरेर जिल्ला तहमा, वडा तहमा, पालिका तहमा संरचना विस्तार गर्ने अभियानका रुपमा यसलाई प्रयोग गर्न आवश्यक छ । तलका साथीहरु मिलेर संगठन विस्तार गर्ने अभियानको निमित्त जागरण अभियानलाई उपयोग गर्नुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ ।
संगठन चुस्त, तुरुस्त र गतिशिल नबनाई हुँदैन । जबसम्म पार्टीलाई विधान अनुसार चलाइन्न अरु कुरा तपसिलमै हुन्छ । अव पनि वैचारिक, सैद्धान्तिक र व्यवहारिक पक्षमा आफुँलाई परिमार्जन गर्न सकेनौं भने कांग्रेसलाई अगाडि बढाउने कुरामा समस्या हुन सक्छ । अहिलेको सन्दर्भमा प्रतिपक्षको भूमिकालाई कसरी प्रभावकारी बनाउने भन्ने बारेमा नेतृत्वले अलि गम्भिरतापूर्वक सोंच्न आवश्यक छ । राज्यले गरेका ज्यादती र अन्यायलाई जनस्तरमा लगेर भण्डारफोर गर्ने गरि कार्यक्रम ल्याउन आवश्यक । अझै पनि हामी सच्चिन खोजेका छैनौ भने त्यो चाहिं दुग्र्भाग्य नै हो ।
(नेविसंघका पूर्व अध्यक्ष पौडेल नेपाली कांग्रेसका केन्द्रिय सदस्य हुन्)
जेठ १५ गते, २०७६ - १०:१९ मा प्रकाशित
काठमाडौं उपत्यकासहित जिल्लाभित्र सार्वजनिक सवारी चल्न दिने सरकारको निर्णय
काठमाडौं उपत्यकामा थप ५ जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि
बाढीले मध्यभोटेकोशी हाइड्रोमा क्षति : सभामुमख सापकोटा प्रभावित क्षेत्रमा, चार घाइतेलाई काठमाडौँ लगियो
कोरोना संक्रमित बढ्न थालेपछि अस्ट्रेलियामा छ हप्ते लकडाउन शुरु
सिन्धुपाल्चोक पहिरो अपडेट : बेपत्ता भएका २० जनाको पहिचान खुल्यो (नामसहित)
नेपालमा घट्यो कोरोना संक्रमितको संख्या, आज थप १०८ जनामा कोरोना पुष्टि
थप १०८ जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि, ३५ जनाको मृत्यु
लण्डनमा नेपाली महिलालाई आफ्नै नवजात शिशुको हत्या अभियोग
बूढानीलकण्ठले लकडाउन अवधिको शुल्क नलिने